UKHATHAZEKILE NGEZINWELE EZIMPUNGA? NAKHU UKUTHI I-SAFFRON INGASIZA KANJANI EMPELENI! - IMVUBABAZON.COM - UBUHLE
Ukhathazekile Ngezinwele Ezimpunga? Nakhu ukuthi i-Saffron ingasiza kanjani empeleni!
Ikhaya Ubuhle Ukunakekelwa kwezinwele Ukunakekelwa Kwezinwele oi-Amruta Ngu Amruta ngoSepthemba 10, 2018
Uma kukhona into eyodwa ngezinwele abesifazane abayisabayo empeleni - ngaphandle kokuwa kwezinwele - nakanjani izinwele ezimpunga. Akekho owesifazane ongathanda ukuba nezinwele ezimpunga futhi angenza noma yini ukuqeda lokho. Kepha futhi, hhayi wonke umuntu uvulekele umbono wokufaka imibala noma wokudaya izinwele zabo. Futhi, akukho lutho olungalungile kuyo. Umbala wezinwele noma udayi wezinwele, ngalokho, kungaba yingozi ezinweleni zakho. Ngakho-ke, wenzani kuleso simo?
Into eyodwa efika ngokushesha emqondweni wethu esimweni esinjengalezi amakhambi asekhaya. Amakhambi asekhaya ayisixazululo ezinkingeni eziningi zesikhumba nezinwele zakho. Ayabizi futhi anemiphumela engemihle zero - okwenza kube ukukhetha okuthandwa abaningi.
Kepha ngaphambi kokuqala ngamakhambi asekhaya kanye nezinzuzo zawo zokwelapha izinwele ezimpunga, lokho umuntu okudingeka akuqonde yikhona okubangela izinwele ezimpunga.
Yini Ebangela Izinwele Ezimpunga?
Kunezici eziningana ezithinta isikhumba nezinwele zethu futhi zibangele ukuphuma kwezinwele ngaphambi kwesikhathi. Kepha okuvame kakhulu kubhalwe ngezansi:
Ukushoda kweMelanin - Kwezinye izimo, ukuntuleka kwe-melanin emzimbeni womuntu kungenye yezimbangela zokumpunga izinwele noma ukwenza mhlophe izinwele. Ukuntuleka kwe-melanin, noma kunjalo, kuya ngokushoda kwezakhi zomzimba kanye namaprotheni emzimbeni womuntu.
AmaHormone - Lesi futhi esinye isici esingahle sidale izinwele zibe mpunga. Ukungalingani kwehomoni kungathinta izinwele zomuntu kanye nesikhumba sakhe.
Ukucindezeleka - Yebo, lesi ngesinye isizathu esikhulu esihambisana nokumpunga kwezinwele. Ingcindezi nendlela yokuphila ematasa kungaholela ezinkingeni ezinjengokumpunga kwezinwele noma ukudala imibimbi nolayini abakahle. Njengoba ingcindezi nendlela yokuphila exakekile inomthelela emzimbeni wakho ngaphakathi, lokhu kuzokhombisa ezinye izimpawu nangaphandle - esinye sezimpawu zokuba mpunga kwezinwele.
Ukubhema - Lokhu kufakazelwa ukuthi ukubhema kuyayithinta imizimba yethu ngezindlela eziningi - omunye wemiphumela yayo ukuphuma kwezinwele ngaphambi kwesikhathi.
Usebenzisa Izixazululo Zasekhaya Ngezinwele Ezimpunga
Amakhambi asekhaya ayisixazululo ezinkingeni eziningi zezinwele. Ayabizi futhi awanayo imiphumela emibi. Zisebenza kangcono kunemikhiqizo esuselwa kumakhemikhali. Futhi, uma ukhuluma ngezinkinga zezinwele ezimpunga namakhambi okulapha - kunezisombululo eziningi zasekhaya ezenzelwe ukwelapha izinwele ezimpunga - esinye sazo sisebenzisa isafron.
Manje, kumele ngabe uyazibuza, isafroni lisiza kanjani ekwelapheni izinwele ezimpunga?
Usafroni Usiza Kanjani Ekumbozeni Izinwele Ezimpunga?
I-Saffron iyindlela evivinyiwe nehlolwe yokwelapha izinwele ezimpunga. Ungabuza kanjani? Isafron ilayishwe ngama-antioxidants. Kuyasiza ukulungisa izintambo zezinwele futhi kukhuthaze nokukhula kwezinwele. Kuyasiza futhi ukumboza ngempumelelo izinwele ezimhlophe, ngaleyo ndlela ikunikeze izingidi ezinhle ezinamacwecwe asagolide. Into eyodwa okumele uyazi ngesafroni ngenkathi uyisebenzisa ukumboza izinwele ezimpunga ukuthi isebenza kahle kulabo abanezinwele ezinombala omnyama.
Ukumboza izinwele ezimpunga usebenzisa isafroni, landela izinyathelo ezilula nezilula ezishiwo ngezansi:
1 isipuni isafron
2 izinkomishi amanzi
Isikhathi esithathiwe ukulungiselela
Thatha ipani bese ufaka amanzi kulo.
Lapho amanzi eseqale ukubilisa, engeza isafron bese uwavumela ukuthi abilise okungenani imizuzu engama-20.
Beka amanzi afakwe isafroni eceleni bese uwavumela aphole.
Uma selehlile, yisebenzise ezinweleni nasekhanda lakho kahle.
Yiyeke okungenani amahora amabili.
Lapho izinwele zakho sezome ngokuphelele ngamanzi afakwe isafroni, zihlanze usebenzisa i-shampoo & conditioner emnene.
Phinda le nqubo kanye ngesonto ukuthola imiphumela oyifunayo.
Leli likhambi lasekhaya elimangalisayo lezinwele ezimpunga. Inika izinwele zakho umthunzi omuhle onsundu ngokusagolide.
wazi kanjani ukubukeka kwengane
izinzuzo zekhofi elimnyama ngaphandle koshukela
indlela yokunciphisa usayizi webele ekhaya ngokwemvelo
ngingakhulelwa uma isidoda sithinta ngaphandle
ususa kanjani udayi ezingutsheni
izifihla-buso ezenziwe ngamehlo zesikhumba esikhanyayo